Somaliland: Marwo Faadumo Siciid oo la Guddoonsiiyay Abaalmarin Caalami Ah - #1Araweelo News Network
Somaliland: Marwo Faadumo Siciid oo la Guddoonsiiyay Abaalmarin Caalami Ah
Qaahira (ANN)-Marwo Faadumo Siciid oo ka mid ah haldoorka Somaliland, isla markaana xilligan ah La taliyaha xidhiidhka caalamiga ah ee gollaha guurtida Somaliland, ayaa la gudoonsiiyay abaalmarin caalami ah.
Munaasibad si weyn loo agaasimay oo ka dhacday caasimadda dalka Masar ee qaahira, ayaa lagu guddoonsiiyay Marwo Faadumo Siciid abaalmarintaa oo lagu maamuso si heer caalami ah shaqsiyada wanaagsan ee qofka wax ka qabta arrimaha bini’aadanimada iyo arrimaha nabada.
Munaasibada Marwo Faadumo Siciid lagu guddoonsiiyay abaalmarin caalami ah, image Araweelo News Network, 5 December 2021.
Munaasibada oo ay ka qaybgaleen Amiirada Sheikha Dana Al Sabah ee dalka Kuwait iyo Boqorada Dua Bint Muhammed Bin Salman ee dhaxalsugaha dalka Sucuudiga, waxa sidoo kale ka qaybgalay wasiirro ka socday xukuumadda dalka Masar, Diblamaasiyiin, qorayaal iyo martisharf kale.
Marwo Faadumo Siciid oo markii la gudoonsiiyay abaalmarinta hadal kooban ka jeedisay, ayaa sheegtay in ay aad uga mahadcelinayso abaalmarinta loo gartay, “Waxaan u mahad celinyaa cid walba oo kaalin ka geystay in lay guddoonsiiyo abaalmarintan.
Marwo Faadumo Siciid oo la guddoonsiiyay abaalmarin caalami ah, image Araweelo News Network, 5 December 2021.
“ Waxaan jeclaan lahaa inaan qalbigayga oo dhan uga mahadceliyo dadka Masar Abaalmarintan cajiibka ah iyo soo dhawayntooda qiimaha baddan” ayay tidhi.
Marwo Faadumo Siciid, ayaa sheegtay in Buug ay hore u qortay oo ka hadlayay wax-qabadkeeda iyo hawlihii samafalka iyo arrimaha xuquuqda Aadamaha oo lagu turjumay luqada Carabiga uu tuxraac u noqday in loo garto abaalmarinta caalamiga ah.